colon – Healthy Life Journal
အူမကြီးကို သန့်စင်ပေးနိုင်သော အစားအစာ ၁၀ မျိုး
———၊ စူး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ၊——— နေ့စဉ်စားသောက်တဲ့ အစားအသောက်တွေမှာ ကောင်းတာရော မကောင်းတာရော ပါနိုင်တဲ့အတွက် အူမကြီးကို ဘယ်လိုအစားအသောက်တွေက သန့်စင်ပေးနိုင်သလဲဆိုတာ သိဖို့လိုအပ်နေပါပြီ။ ၁။ သံပရိုသီး အချဉ်ဓာတ်ပါတဲ့ သံပရိုသီးလို အသီးတွေက အစာခြေစနစ်ကို သန့်စင်ပေးဖို့ အကောင်းဆုံးအသီးဖြစ်ပါတယ်။ မနက်တိုင်း...
– စူး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) အူနဲ့ အူမကြီးသန့်စင်စေဖို့ အောက်ပါအစားအသောက်တွေကို စားသောက်ပေးရပါမယ်။ (၁) သံပရိုသီးဖျော်ရည် သံပရိုသီးဖျော်ရည်မှာ အင်တီအောက်ဆီးဒင့်နဲ့ ဗီတာမင်စီပါဝင်မှုများတာကြောင့် အစာခြေ လမ်းကြောင်းစနစ်အတွက် ကောင်းကျိုးရှိပါတယ်။ အူမကြီးသန့်စင်ဖို့အတွက် သံပရိုသီးဖျော်ရည်ထဲ ပျားရည်နည်းနည်း၊ ဆားနည်းနည်းခတ်ပြီး သောက်ပေးပါ။ မနက်စောစော အစာအိမ်ထဲ...
ပါမောက္ခဦးအေးမွန် (ခွဲစိတ်ဆရာဝန်ကြီး)နှင့် တွေ့ဆုံဆွေးနွေးခြင်း မေး. အူမကြီးရောင်ရမ်းခြင်းကြောင်း သိပါရစေဆရာ။ ဖြေ. ဝမ်းဗိုက်ထဲမှာ အူသိမ် (Small Intestine)နဲ့ အူမကြီး (Large Intestine) ဆိုပြီးရှိတဲ့အနက် အူမကြီးကို Colon လို့ ခေါ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် အူမကြီးရောင်တယ်ဆိုရင် Colitis...
ဗီတာမင်ဒီများခြင်းက အူမကြီးကင်ဆာ အန္တရာယ်ကို၃၁ ရာခိုင်နှုန်း လျော့ကျစေနိုင်
၊ ကိုထက် ၊ ဗီတာမင်ဒီများတာက အူမကြီးကင်ဆာအန္တရာယ်ကို သိသိသာသာ လျော့ကျစေနိုင်တယ်လို့ နိုင်ငံတကာလေ့လာမှုအသစ်တစ်ခုအရ သိရပါတယ်။ဗီတာမင်ဒီကို အဆီများတဲ့ ငါးနဲ့ နေရောင်ခြည်ကနေ ရရှိပြီး ဗီတာမင်ဒီက ကင်ဆာဆဲလ်သွားရာ လမ်းကြောင်းကို ပိတ်ဆို့တဲ့နည်းနဲ့ အစာအိမ်မှာအကျိတ်တွေ မဖြစ်အောင် ဟန့်တားကာကွယ်ပေးတယ်လို့ သိရပါတယ်။ အထူးသဖြင့်...
အူမကြီး ကျန်းမာရေး ကောင်းစေရန်
၊ လရိပ်မေ ၊ အူမကြီးဆိုတာ ခန္ဓာကိုယ်ကနေ စွန့်ပစ်ပစ္စည်းတွေစွန့်ထုတ်ဖို့ ကူညီတဲ့ အစိတ်အပိုင်းဖြစ်ပါတယ်။ အူမကြီးဟာ ရေနဲ့ ဆားတွေကိုစုပ်ယူပြီး ဓာတ်ဆားဟန်ချက်ညီမျှအောင် ထိန်းချုပ်ပါတယ်။ နေ့စဉ် အဆင်သင့်စာ၊ ဆီကြော်စာ၊ ပြုပြင်ထားတဲ့ အစာစတာတွေကို အစားများရင် အူမကြီးထဲမှာ အဆိပ်တွေ ပြည့်နေနိုင်ပါတယ်။...
အူမကြီးကင်ဆာအဆင့်(၄) ကုသအောင်မြင်တာ ၈ နှစ်ရှိပြီဖြစ်တဲ့ မခင်သွယ်ဦး
ဇွန်ခိုင်ဦး (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ပုံမှန်အတိုင်း ကျန်းမာနေသော မခင်သွယ်ဦးသည် အသက် ၂၉ နှစ်အရွယ် ၂၀ဝ၉ ခုနှစ် ဒီဇင်ဘာလတွင် ဝမ်းသွားရင်း သွေးပါလာသဖြင့် ဆေးခန်းသွားပြခဲ့ရာမှာ အူမကြီးကင်ဆာ အဆင့် (၄)ရှိမှန်း သိရှိခဲ့ရသူ ဖြစ်သည်။ “ဝမ်းသွားရင်း သွေးပါတယ်။ တခြားတော့...
၀မ်းချုပ်လွန်းလို့ဖြစ်ခဲ့တဲ့ အူမကြီးကင်ဆာအဆင့်(၂) ကုသအောင်မြင်ထားသူ ညောင်လေးပင်ဆရာတော် ဦးတိက္ခသာရ
၊ ဇွန်ခိုင်ဦး ၊ (ဆေးဝါးတက္ကသိုလ်) ပဲခူးတိုင်းဒေသကြီး၊ ညောင်လေးပင်မြို့ရှိ ရှမ်းရွာတွင် ကျောင်းထိုင်ဆရာတော်ဖြစ်သူ အသက် ၂၉ နှစ်အရွယ် ညောင်လေးပင်ဆရာတော် ဦးတိက္ခသာရက အူမကြီးကင်ဆာခရီးလမ်း ဖြတ်သန်းခဲ့ပုံကို ယခုလို ပြန်လည် မိန့်ကြားခဲ့သည်။ “ဦးဇင်းက ဝမ်းချုပ်တယ်၊ ဝမ်းချုပ်တာကို သာမန်ဝမ်းချုပ်တယ်လို့ပဲ...
အဆင့်(၄) အူမကြီးကင်ဆာဝေဒနာရှင် သက်သတ်လွတ်စားရာမှ သက်သာလာ
၊ ကိုထက် ၊ အခုအခါ အသက် ၄၃ နှစ်အရွယ်ရှိ ရော့ဘ်မူးဘယ်ရီက ၂၀၁၂ မှာ အူမကြီးကင်ဆာအဆင့် (၄) ခံစားခဲ့ရသူဖြစ်ပြီး အူမကြီး၊ ပြန်ရည်ကျိတ်နဲ့အသည်းတွေအထိ ကင်ဆာပြန့်နှံ့နေခဲ့ပါတယ်။ ရော့ဘ်ကို အူမကြီးဖြတ်ထုတ်ပြီး ကင်ဆာဆေးသွင်းကုထုံးနဲ့ ဓာတ်ရောင်ခြည်ကုထုံးကို နှစ်ကြိမ်စီပြန်လုပ်ဆောင်ရမယ်လို့ ဆရာဝန်တွေကဆိုပါတယ်။...